भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ ले नगरकै सबैभन्दा बढी कर संकलन हुने व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रको परिचय बनाएको छ । अरनिको राजमार्गको लोकन्थलीदेखि क्षयरोग निवारण केन्द्रसम्मको ६ लेनको करिब दुई किलोमिटर खण्ड यस वडामा पर्छ । नगरपालिकाको शिक्षित र व्यावसायिक नागरिकको बाक्लो बसोवास भएको वडामा धेरै समस्या र धेरै योजना पनि छन् । वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कुटुसँग गरिएको कुराकानी ।
वडाध्यक्षको रूपमा के–के काम गर्नुभयो ?
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा रोकिएका काम व्यवस्थापनमा जोड दिएको छु । वडा कार्यालयको सेवा व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । पहिले एकजना सचिव मात्रै थिए । सबै सेवा पाउन नगरपालिका धाउनुपथ्र्यो । अहिले आफ्नै भवन नभए पनि सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएका छौँ । वडामा मात्रै ६ जना कर्मचारी छन् । सेवा कम्प्युटर प्रणालीबाट व्यवस्थित गरिएको छ । वडावासीको सुविधालाई केन्द्रीत गरेर विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ । वडा कार्यालयको करिब तीन करोड लागतका आफ्नै भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । सडक कालोपत्रे गर्ने, ढुंगा छाप्ने, ढल व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । यो शिक्षित र बुद्धिजीवीको बाक्लो बसोवास भएको नगरकै सबैभन्दा बढी कर संकलन गर्ने व्यवसायिक वडा हो । यहाँबाट चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा मात्रै एक करोड रूपैयाँ बढी उठेको छ ।
वडाका मुख्य–मुख्य समस्या के–के हुन् ?
नगरकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको बजार क्षेत्र हाम्रो वडामा पर्दछ । यहाँ करिब १० हजार घरधुरी छन् । एउटै घरमा दशौँ–बिसौँ परिवार बसेका छन् । मुख्य समस्या खानेपानी र ढलको छ । सडक र सहरी विकासको पनि केही समस्या छन् । भित्री सडक कच्ची र साँघुरा छन् । फोहोर व्यवस्थापनको पनि समस्या छ ।
खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
यहाँको मुख्य समस्या भनेकै खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको हो । बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्याका कारण पानीको खपत बढिरहेको छ । तर, मुहान र श्रोत छैनन् । यहाँ सार्वजनिक इनारहरू छैनन् । निजीको कुनै तथ्यांक छैन । डिपबोरिङ गरेर दिगो समाधानको कोसिस भइरहेको छ । केयुकेएलसँगको सहकार्र्यमा करिब १५ करोडको खानेपानी योजना निर्माणको चरणमा छ । त्यसपछि खानेपानीको समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । तर, डिप बोरिङ गर्न पनि जमिनमुनिको पानीसमेत घट्दो रहेकाले समस्या भएको छ । मध्यपुरकै बोडेबाट काठमाडौंतर्फ पानी लगिएको छ । अहिले बोडेबाट सातामा एक दिन र लोकन्थलीबाट दुई दिन मात्र पानी आउँछ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइएपछि बोडेको पानी सबै ल्याउन पनि पहल गरिरहेको छु । लोकन्थलीको पानी पनि काठमाडौं पठाउन परेन भने खानेपानीको समस्या अवस्य हट्नेछ । नगरपालिकाले खानेपानीका लागि दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वडाले पनि १० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ ।
ढल व्यवस्थापनको कुरा गर्दा वडाको करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा ढल निर्माण भएको छ । तर, पहिलेभन्दा सहरीकरण बढेकाले ढल साँघुरा बनेका छन् । वडाभित्र रहेको केही अव्यवस्थित बस्तीका कारण पनि ढल व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ । ढलकै कारण पानी पर्नासाथ डुबान हुने समस्या छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न वडा र सिंगो नगरपालिकाबाटै पहल भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा वडाले २० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएर ढल मर्मत र सफाइको काम गर्दैछ । नगरपालिकाले पनि सात करोड रूपैयाँ ढल व्यवस्थापनमा छुट्याएको छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र फोहोर व्यवस्थापनमा तपाईंको योजना के छ ?
अन्य वडाको समेत केही भूभाग गरी करिब आठ सय रोपनी क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेको छ । अव्यवस्थित जग्गा र सहरीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले मेरै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । सहरीकरणका विज्ञसँग सहकार्य गरी व्यवस्थित गर्ने पहल थालेका छौँ । हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ । धमाधम घर थपिँदै छन् । तर, नक्सा पास हुन सकेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाकै ध्यानाकर्षण गराएको छु । आफ्नै डम्पिङ साइड नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिकाकै मुख्य समस्या बनेको छ । वडाले आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहेको छ । अहिले नगरपालिकाले दैनिक दुई गाडी फोहोर मात्रै उठाउँछ । वडाको फोहोर फूलबारी फोहोर व्यवस्थापनले सातामा दुई दिन उठाउँछ । हामीले वडाकै वार्षिक योजनाबाट मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा ३० वटा डस्टबिन राख्ने र कुहिने तथा नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने तयारी गरेका छौँ ।
विकासको मुख्य आधार भनेकै सडक हुन् । तपाईंको वडामा सडकको अवस्था कस्तो छ ?
अरनिको राजमार्गको लोकन्थलीदेखि क्षयरोग निवारण केन्द्रसम्मको ६ लेनको करिब दुई किलोमिटर खण्ड हाम्रो वडामा पर्दछ । कौशलटार–बालकोट, कौशलटार–सानोठिमी, गठ्ठाघर–सानोठिमी, चारदोबाटो–बालकोट सडकखण्ड वडाका अन्य मुख्य सडक हुन् । यी सडक पहिल्यै कालोपत्रे भइसकेका छन् । यीबाहेकका भित्री सडकको अवस्था नाजुक छ ।